Home Wararka Ganacsato: “Toban maheradood ayaa igaga gubtay suuqa” ( Sawiro Suuqa Waaheen)
Ganacsato: “Toban maheradood ayaa igaga gubtay suuqa” ( Sawiro Suuqa Waaheen)
Khasaare lixaad leh oo malaayiin doolar gaaraya ayaa ka dhashay dab saacado badan socday oo xalay baabi’iyay suuqa ugu wayn magaalada Hargeysa ee Waaheen.
Abaare 8-dii fiidnimo ee xalay ayuu kacay dabka, hasayeeshee kooxaha dabdamiska ee la tacaalaya xakamaynta dabka ayaa howshoodii waxaa carqaladeeyay suuqa oo aanan lahayn wadooyin waafi ah oo loo maro.
Suuqa oo ku fadhiya masaafo gaaraysa 5KM ayaa tan iyo waqtigan waxaa soconaya dedaallada lagu daminayo dabkaasi ka kacay, iyadoo maayirka magaalada Hargeysana uu isagoo qiiraysan tilmaamay in hantidii magaaladiisa ay baaba’day.
Ilaa hadda lama sheegin dad ku dhintay balse hanti ayaa ku gubatay dabka.
“Waxaan deganahay suuqa Waaheen Bacdlaha Hargeysa, muddo 20 sanadod ayaan degenaa 10 mehradood ayaa iiga gubtay, aniga mehradaheydu waxay ahaayeen qurxinta guryaha wixii oo dhan wey gubteen” ayuu yiri Baasho Bushaaro oo kamid ah ganacsatdii hantida uga gubtay dabka.
“Umaddiina wey ku ceyroowday suuqa, xaaladda umadda caawa waa mucsir , hanti wixii suuqa yaallay waxbo ka aanay bixin laakiin waa wax Ilaahey qaddaray”
Cabdiraxmaan Ibraahim oo kamid ah ganacstada ay hantidooda uu baabi’iyay dabka ayaa BBC u sheegay in saddex mehradood ay kaga gudbteen goobta.
“Magaalada waxaan ku lahaa saddex mehradood waad arkeysaan waa jiingadahaa iyo dambaskaa,saddexda mehradood waxaa iiga burburtay ilaa 70,000”
Dabkan ayaa haatan intiisa badan la damiyay inkasta uu khasaasre xooggan dhaliyay.
Mas’uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in sababta si deg deg ah loogu xakameyn waayay dabka ay aheyd in la waayay waddo loo maro goobta taasina ay horseeday in holaca uu qabsado suuqa isla markaana ay xaaladda faraha ka baxday.
Shacabka, ciidamada iyo kuwa dab damiska ayaa dadaal ugu jiray sidii loo xakameyn lahaa dabka.
“Waxaan ahay mayir magaaladiisa gubatay, hantidiisa baaba’day, dhaqaalihii dadkiisu baaba’ay” ayuu yiri, mayirka Hargeysa, Cabdikariim Mooge oo u warramayay BBC-da xilli uu aad uga argagaxsanaa dhacdada.
Lama ogo sababta ka dambeysay dabkan, inkasta oo ay wararka sheegayaan in markii uu hore ee dabka ka bilowday guri ku yaalla suuqa kaas oo markii dambe ku fiday gebi ahaanba suuqa Waaheen.
Dhanka kale gudoomiyaha Rugta Ganacsiga ee Jamhuuriyadda goonni isu taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegay in 40% hantidii Hargeysa ay halkaasi ku burburtay.
Jamaal Caydiid Ibraahim ayaa carrabka ku adkeeyay sida loogu baahan yahay in la garab istaago dadka cayrtoobay, iyadoo uu dhanka kale tibaaxay in ganacsatadu ay qeyb ku leeyihiin khasaaraha uu dabkaasi gaystay maadaama buu yiri ay ka cagajiideen inay dhagaystaan codsiyadii ka imanayay xukuumadda ee ahaa in la furo waddooyinka suuqa.
Wuxuu intaa ku daray in hanti dhan malaayiin doolar ay ku gubatay suuqa.
“Meesha wi baaxad weyn baa loo dagay, dariiqyada badan oo laga soo galo ama mid laga galo wey ku yar yihiin, dhibaatada ugu badan ee dab damiska u suurtageli weyday inuu gudaha galo , dariiqyada xiran weeye, dariiqyada aad u xirnaa, hanti malaayiin doolar ayaa ku gubatay dabka” ayuu yiri guddoomiyaha Rugta ganacsiga ee Somaliland.
Previous articleGanacsato malaayiin doolar ku waayday dabkii xalay ka dhacay Hargeysa
Next articleFears of famine grow amid worst drought in Somalia in decades
Gobolka Sanaag God laga qodo Dahabka oo ku dumay dad shacab...